Wakiilka Midowga Africa ee Soomaaliya oo si kul u canbaareeyey dilka Weriye Cabdixareed Cismaan - Horseed Media
Wakiilka Midowga Africa ee Soomaaliya oo si kul u canbaareeyey dilka Weriye Cabdixareed Cismaan January 18, 2013 Share this:FacebookTwitterGoogleMidowga Afrika ayaa si kulul u cambaareeyay dilka wariye Cabdi Xareed Cismaan oo saaka ay koox hubaysan ku toogatay magaalada Muqdisho.
Wakiilka gaarka ah ee Midowga Afrika u qaabilsan Soomaaliya, Ambassador Mahamat Saleh Annadif ayaa xusay inuu si aad ah uga naxay, kana murugooday sii socoshada dilalka iyo dhibaataynta wariyeyaasha Soomaaliyeed ,sida lagu sheegay Warsaxaafadeed kasoo baxay xafiiskiisa. Mr.Salah ayaa dilka weirayaha ku tilmaamey mid wuxuushnimo ah isla markaana muhim ay tahay sidii loogu wada istaagi lahaa in falalka caynkaasi ahi ay sii socdaan.
Wuxuu intaasi ku daray in arrin wel-wel leh ay tahay in Muqdisho oo xasillooni ay ka jirto ay haddana ka dhacayaan falalka foosha xun ee lagu ugaarsanayo saxafiyiinta .
Wakiilka gaarka ah ee Midowga Afrika u qaabilsan Soomaaliya ayaa farta ku fiiqay in loo baahan yahay in la xaqiijiyo amniga deegaanka ay shaqaalaha warbaahinta ka howlgalayaan, si bulshada ay uga warqabto horumarrada ka jira gudaha wadanka.
Weriye Cabdi-xareed ayaa koox bistoolado ku hubeysan ku dileen Degmada Wadajir isagoo lagu aasay qabuuro ku yaala Isbitaalka Madiina halkaas oo uu dhaawac ahaan ugu geeriyooday Weriyaha.
Waa weriyihii u horeeyey ee sanadkan cusub la dilo, iyada oo sanadkii hore 2012 ahaa sanadkii ugu badnaa ee la dirlo suxifyiin Soomaaliyeed.